Coats up to 200 µm ( - İngilizce - Birmanca Çeviri ve Örnekler
Şunu aradınız:: coats up to 200 µm ( max ) (İngilizce - Birmanca)
Package is already up to date
Two little eyes to look up to God
The virus can survive on surfaces up to 72 hours.
ဗိုင်းရပ်စ်က မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် 72 နာရီအထိ ရှင်သန်နိုင်ပါသည်။
Up to now, no live MERS-CoV can be found in wild bats.
ယခုအထိ လင်းနို့ရိုင်းများတွင် သက်ရှိ MERS-CoV ကို မတွေ့ရှိရပါ။
i see it going from the center of your chest going up to your neck
အဲဒါက ခင်ဗျား ရင်ဘတ် အလယ်ကနေ လည်ပင်းဘက်ကို တက်သွားတယ်လို့ သိရတယ်
Sadly, this year is shaping up to be the year of Syrian refugees.
ဤနှစ်မှာ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်တစ်ခုက ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်များ၏ နှစ်တစ်နှစ်လို ဖြစ်နေတော့သည်။
ထာဝရဘုရားသည် မိမိအမှုကို စောင့်အံ့သော ငှါ ထတော်မူ၏။ မိမိလူတို့ကို တရားစီရင်မည်ဟု အားထုတ်တော်မူ၏။
ထိုသို့ မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ တပည့်တော်တို့ ရှေ့၌ ကြွ၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ခရီးသွားတော်မူ၏။
ထိုနောက်မှ ငါတို့သည် အသုံးအဆောင်များကို ပြင်ဆင်၍ ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏။
A study in Singapore found that an uncovered cough can lead to droplets travelling up to 4.5 meters (15 feet).
စင်ကာပူတွင် လေ့လာမှုအရ အကာအကွယ်မဲ့ ချောင်းဆိုးခြင်းသည် အရည်စက်ကလေးများကို 4.5 မီတာ (15 ပေ) အထိ ရောက်သွားစေသည်ဟု သိရသည်။
Keep up to date—the outbreak and the travel restrictions are changing rapidly.
နောက်ဆုံးရ သတင်းအချက်အလက်များအား စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပါ။ ကူးစက်မှုနှင့် ခရီးသွားလာမှု ကန့်သတ်ချက်များသည် လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
Failure to comply will result in up to two years in prison orahefty fine.
ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ် သို့မဟုတ် ကြီးလေးသော ဒဏ်ကြေးငွေကို ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ယုဒပသခါပွဲခံချိန် နီးသည်ရှိသော်၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူ၏။
အဘိနောင်၏သားဗာရက်သည် တာဗော်တောင်ပေါ်သို့ တက်ကြောင်းကို သိသရအား ကြားပြောလျှင်၊
Ebola was originally predicted to cause up toamillion cases with halfamillion deaths.
အီဘိုလာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဦးရေ လူတစ်သန်းအထိရှိလာနိုင်ပြီး အဆိုပါလူတစ်သန်း၏ ထက်ဝက်မှာ သေဆုံးနိုင်သည်ဟု မူလက ခန့်မှန်းထားခဲ့သည်။
ကိုးကွယ်ခြင်းအမှုနှင့် ထိုပွဲသို့ ရောက်လာသောသူတို့တွင် ဟေလသလူအချို့ပါ၏။
ထိုနောက်မှယုဒပွဲခံစဉ်တွင်၊ ယေရှုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူ၏။
ပေတရုသည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ တက်ရောက် လာသောအခါ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံသောသူတို့က၊
ဆယ်ယူလော့ဟု ဧလိရှဲဆိုသည်အတိုင်း၊ တပည့် သည် လက်ကို ဆန့်၍ ဆယ်ယူ၏။
ထိုနောက် ရှမွေလသည် ရာမမြို့သို့သွား၍ ရှောလုသည် မိမိနေရာ ဂိဗာမြို့၊ နန်းတော်သို့ ပြန်သွား လေ၏။
smarginatura (İtalyanca>İngilizce)siktir (Ermenice>Rusça)sharon (İngilizce>Afrikanca)vendo (Esperanto>Almanca)gennemførelsesmæssige (Danca>İngilizce)window level (İngilizce>Rusça)kuchora (Svahili>İngilizce)apa maksud prasiswazah (İngilizce>Malayca)kahulugan ng erparts (İngilizce>Tagalogca)bella (Latince>Fransızca)dahon ng pandan (Tagalogca>İngilizce)pelita ayam造句字典 (Çince (Modern)>Malayca)prénotation (Fransızca>İngilizce)i were un canberra last spring? (İngilizce>İspanyolca)maksud muah (İngilizce>Malayca)non omnia possumus omnes (Latince>Fransızca)varsham lo thadavadam (Telugu>Hintçe)fine sooji (İngilizce>Kannada)terminolohiya sa larangan ng guro (Tagalogca>İngilizce)omne quod erit finis (Latince>İtalyanca)saquen un boligrafo (İspanyolca>İngilizce)flip pages on long edge on short edge (İngilizce>Fransızca)duly self attested (İngilizce>Tamilce)apne muje panch min pahle call ki thi (Hintçe>İngilizce)homefront (İngilizce>Yunanca)